गर्मी बढी भएको वर्षमा विद्यार्थीको प्रदर्शन कमजोर ! | गृहपृष्ठ
Home र यो पनि गर्मी बढी भएको वर्षमा विद्यार्थीको प्रदर्शन कमजोर !
on: १७ जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०६:३० र यो पनि
काठमाडौं (अस) । गर्मी महीनामा हामीलाई कतै हिँडडुल गर्न मन लाग्दैन । काम गर्ने जाँगरै लाग्दैन । यस्तो बेलामा पढ्न त के मन लाग्नू । गर्मी र पसिनाका कारण यति धेरै आलस्य महसुस हुन्छ कि लेखपढ गर्न पनि फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै गाह्रो लाग्छ । अझ कतिपयलाई त किताब देख्नासाथ निद्रा नै लाग्छ । पढ्नै अल्छी लागेपछि परीक्षामा नतिजा धेरै राम्रो कहाँबाट आउँछ ?
हार्वर्डलगायत केही अमेरिकी विश्वविद्यालयले गरेको ‘हिट एण्ड लर्निङ’ शीर्षक अध्ययनले समेत उच्च तापमान र न्यून शैक्षिक उपलब्धिबीच महत्त्वपूर्ण अन्तरसम्बन्ध हुने कुरा देखाएको छ । यस क्रममा अनुसन्धाताहरूले अमेरिकाका माध्यमिक विद्यालयका १ करोड विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कको विश्लेषण गरेका थिए । यसमा गर्मी मौसमले परीक्षाको नतिजामा नकारात्मक असर परेको देखायो । गर्मी बढ्दा विद्यार्थीलाई ध्यानकेन्द्रित गर्न गाह्रो हुने गरेकाले यस्तो भएको बताइएको छ ।
प्रत्येक पटक औसत आधा डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्दा परीक्षामा विद्यार्थीको प्रदर्शनमा झण्डै १ प्रतिशतले घट्ने गरेको अध्ययनमा पाइएको छ । विद्यालयमा एयर कण्डिशनिङको प्रयोग बढाउनु यस समस्याको सबैभन्दा व्यावहारिक उपाय हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताले सुझाव दिएका छन् । तातो हावा चलेको समयमा जाँच दिने विद्यार्थी उखरमाउलो गर्मीका कारण आफूहरूलाई असर परेको गुनासो गर्छन् । हार्वर्ड विश्वविद्यालय, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, लस एञ्जलस र जर्जिया स्टेट युनिभर्सिटीका प्राज्ञले गरेको यस अध्ययनले तापक्रम बढ्दा विद्यार्थीको प्रदर्शन घट्ने स्पष्ट प्रमाण दिएको छ । विश्लेषणका लागि अनुसन्धानकर्ताले सन् २००१ देखि सन् २०१४ सम्म अमेरिकाभर फरक जलवायु र मौसममा फरक वर्षका जाँचमा माध्यमिक तहका विद्यार्थीले गरेको प्रदर्शनलाई हेरेका थिए ।
यस अनुसन्धानको प्रतिवेदन ‘यूएस नेशनल ब्यूरो अफ इकोनोमिक रिसर्च’मा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । प्रतिवेदनले उच्च तापक्रम भएका वर्षमा विद्यार्थीले जाँचमा कम अङ्क ल्याएको र चिसो वर्षमा राम्रो नतिजा ल्याएको देखाएको छ । उखरमाउलो गर्मीमा विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पठनपाठन गर्न निकै गाह्रो हुने र विद्यालयबाहिर पनि गृहकार्यमा ध्यानकेन्द्रित नहुने अध्ययनले देखाएको छ । औसतमा शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत तापक्रम बढ्दा विद्यार्थीको सिकाइ १ प्रतिशतले घटेको हिसाब अनुसन्धाताले निकालेका छन् । बढी चिसा दिनले चाहिँ विद्यार्थीको उपलब्धिमा खासै असर नपारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तापक्रम २१ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्न थालेपछि विद्यार्थीको उपलब्धिमा नकारात्मक असर देखिएको उनीहरूले बताएका छन् ।
तापक्रम ३२ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेपछि सिकाइ घट्दै गइरहेको र यो ३८ डिग्रीभन्दा माथि पुगेपछि सिकाइ घट्ने दर थप तीव्र भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पढाइमा गर्मीको प्रभाव न्यून आय भएका परिवार र अल्पसङ्ख्यक जनजातिका विद्यार्थीमा झनै धेरै पाइयो । अलि हुनेखाने परिवार र विद्यालयले समेत विद्यार्थीको पढाइ बिग्रियो भनेर घर वा स्कुलमै थप ट्युशनको व्यवस्था गरिदिएका हुन्छन् । तर, ट्युशनमा लगानी बढाउनुभन्दा सक्नेले घर र स्कुलमै एयर कण्डिशनिङमा बढी खर्च गर्दा नतिजा राम्रो आउँछ भन्छन् अनुसन्धाताहरू । गर्मीका कारण विद्यार्थीले कक्षाकोठामा शिक्षकले पढाइरहेको कुरा वा गृहकार्यसम्बन्धी निर्देशन राम्रोसँग सुन्न नसक्दा पढाइमा ध्यानकेन्द्रित गर्नै सक्दैनन् र यसले परीक्षामा कम अङ्क आउँछ भन्छन् प्रतिवेदनका सहलेखक तथा हार्वर्ड केनेडी स्कुल अफ गभर्नमेण्टका एशोसिएट प्राध्यापक जोशुहा गूडम्यान ।
पछिल्लो अध्ययनले भने जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले विद्यालयको नतिजा र विद्यार्थीको प्रदर्शनमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने चिन्तासमेत थपेको छ । हीट एण्ड लर्निङ’ नामक यस अध्यननको नतिजाले भविष्यमा कुनै १ वर्षको गर्मीको प्रभाव विद्यार्थीको दीर्घकालीन प्रदर्शनमा पर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे थप अध्ययन अनुसन्धान बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।